အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? (2017) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Volume ကို 4, အမှတ် 9, p663-664 စက်တင်ဘာလ 2017
မာ့ခ် N ကို Potenza, မာတေယူချ် Gola, Valerie Voon, Ariel Kor, Shane W Kraus
၎င်းတို့၏မှတ်ချက်ခုနှစ်တွင် The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျွန် B ကို Saunders နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ1 လြောကျပတျစှာ DSM-5 ၏မျိုးဆက်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရာစွဲလမ်းမမှန်အဖြစ်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမမှန်များ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိငြင်းခုံမှုများ, ဖော်ပြထား2 နှင့် ICD-11 ၏မျှော်လင့်ပါတယ်။3 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ ICD-11 တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုနေပါသည်။3 သို့သော်ကျနော်တို့ကယုတ္တိဗေဒ Saunders နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကလျှောက်ထားယုံကြည်1 ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ compulsive လျှောက်ထားပေလိမ့်မည်။
(hypersexual ရောဂါအဖြစ် operationalized) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ DSM-5 အတွက်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဖယ်ထုတ်လိုက်, တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၏မျိုးဆက်ပေမယ့်ခဲ့သည်။2 ဤသည်ဖယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, သုတေသနနှင့်ကုသရေးအားထုတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်တရားဝင်ရောဂါမရှိဘဲ Clinician ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။4 compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါတဏှာ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ, compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုကြားမှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လက်တဲ့အဆိုပြုထားအမြင်နှင့်ကိုက်ညီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကိုယ်စားပြု, ICD-11 အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုနေပါသည်။5 ဒီအမြင်အချို့ DSM-IV ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်များအတွက်အထူးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသင့်လျော်သောပါပြီပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤဒြပ်စင်ရှည်လျားစှဲဖို့အလယ်ပိုင်းစဉ်းစားခဲ့ကြခြင်း, DSM-5 မှ DSM-IV ကနေအကူးအပြောင်းအတွက်အခြားသောခွဲခြားမ Impulse Control ကို Disorders ၏အမျိုးအစားတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အမည်ပြောင်းနှင့် reclassified ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ, restructured ခဲ့သည်။2 ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, ICD-11 beta ကိုမူကြမ်းဆိုဒ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်စာရင်းပြုစုခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, pyromania, kleptomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါပါဝင်သည်။3
တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများ၏ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးစလုံးအကောင်းအဆိုး cons ရှိပါတယ်။ တဦးတည်းလက်တွင်, ICD-11 အတွက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ပါဝင်မှုရောဂါအတွက်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, ကုသမှု, ဤရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏လေ့လာမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါမှဆန့်ကျင်အဖြစ်အပျက်သဘောကုသမှုရရှိနိုင်မှု, ကုသမှုလေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနအားထုတ်မှုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ကုသမှုနှင့်လေ့လာမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါလက်ရှိတွင် ICD-11 မူကြမ်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်အဆိုပြုလိင်စွဲလမ်း၏ကျဉ်းသက်တမ်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ICD-11 များအတွက်အဆိုပြု Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူကောင်းစွာ fit မှပုံရသည်။3 ကျနော်တို့သုတေသီများတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားမကြာသေးမီဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်နှင့် Clinician အတှကျအကြိုးရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ခံစားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီရောဂါကြောင့်ထိခိုက်။
VV ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီထံမှထောက်ပံ့ငွေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ MNP ထောက်ပံ့ငွေများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီရေးစင်တာနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှအခြားအထောက်အကူပြုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ အားလုံးသည်အခြားစာရေးဆရာများအဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်အကျိုးစီးပွားကြေညာ။
Saunders, JB, Degenhardt, L ကိုနှင့်ဖါရီးလ်, အမ်အလွန်အကျွံလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း: စွဲလမ်းမမှန် ?. ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017; 4: 433-435
American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ (DSM-5) ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှထုတ်ဝေခြင်း, Arlington; 2013
WHO က။ ICD-11 beta ကိုမူကြမ်း။ (။ (ဇူလိုင်လ 18, 2017) ဝင်ရောက်) http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/lm/en နေ့စွဲ: 2017
Kraus, SW, Voon, V ကိုနှင့် Potenza, MN ။ တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သင့်ပါတယ် ?. စွဲလမ်း။ 2016; 111: 2097-2106
Grant က, je, Atmaca, M က, Fineberg, NA et al ။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD-11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 13: 125-127